इजरायलबाट सिक्न योग्य – कृषि प्रविधि !  HamroKatha
इजरायलबाट सिक्न योग्य – कृषि प्रविधि !
इजरायलको ८० प्रतिसत भूभागमा खेति गर्न मिल्दैन् । तर, कृषिजन्य प्रविधिको सवालमा इजरायल विश्वकै धनी मुलुक हो । इजरायलको श्रमबजारमा ३ दशमलब ७ प्रतिशत मात्र किसान छन् । तर, पत्याउनै नसकिने गरि आफूलाई चाहिने ९५ प्रतिशत खाद्यान्न उ आफैंले उत्पादन गर्छ ।
हाम्रो कथा २०७६ साउन १४ गते १५:२१
तस्बिर : BusinessWorld
इजरायल यस्तो मुलुक हो, जसले भौगोलिक कठिनाईलाई चिर्दै कृषिलाई वैज्ञानिकरण गरेको छ । ईजरालमा जम्मा २० प्रतिशत भुभागमात्र खेतियोग्य जमिन छ । त्यसमा पनि पानीको निकै अभाव छ । तर, यही मलुकमा कृषिमा क्रान्ति भएको छ । यस्तो लाग्छ, यहाँको माटोमा फलफुल र तरकारी होईन चमत्कार फलिरहेको छ ।
इजरायलको ८० प्रतिसत भूभागमा खेति गर्न मिल्दैन् । तर, कृषिजन्य प्रविधिको सवालमा इजरायल विश्वकै धनी मुलुक हो । इजरायलको श्रमबजारमा ३ दशमलब ७ प्रतिशत मात्र किसान छन् । तर, पत्याउनै नसकिने गरि आफूलाई चाहिने ९५ प्रतिशत खाद्यान्न उ आफैंले उत्पादन गर्छ । इजरायलले यसरी कृषिमा विकास गरेको सन् १९४८ को स्वतन्त्रता पछि हो ।
इजरायलले कृषिमा यसरी विकास गर्नुमा सहकारी ठूलो योगदान छ । इजरायलमा किबुज र मोसाभ गरेर दुई प्रकृतिका कृषि समुदाय छन् । किबुजमा उत्पादनका साधनमा समुदायको अधिकार हुन्छ । समुदायका हरेक व्यक्तिले गरेको मेहनतबाट हरेक व्यक्ति लाभान्वित हुन्छन् ।
मोसाभ अन्तर्गत भने, हरेक घरपरिवारको आआफ्नै खेति हुन्छ र आआफु खेति गर्छन् तर विक्रिवितरण तथा बजारिकरण भने सहकारीको संलग्नतामा हुन्छ । यसरी २ तरिकावाट इजरायलको कृषिमा उत्पादकत्व बृद्धि भइरहेको छ ।
गहुँ, मकै, एभोकाडो, किवि, आँप, अंगुर, टमाटर, काँक्रो, मरिच, स्याउ, केरा लगायत सबै सबै उत्पादन इजरायलमै हुन्छ । सिधा अर्थमा भन्ने हो भने, कृषिलाई चाहिने विश्वको सबै हावापानी इजरायलमा पाइन्छ ।
देशैभर अंगुर उत्पादन हुने भएकाले, सन् २०११ मा इजरायलले २६.७ मिलियन अमेरिकि डलरको वाइन निर्यात गरेको थियो । दुध उत्पादनमा त्यस्तै अग्रणी छ इजरायल । प्रतिगाई १० हजार लिटर दुध सहित इजरायल दुध उत्पादनमा पहिलो नंबरमा छ । साइट्रस फ्रूट उत्पादन तथा निर्यातका साथै फूल निर्यात गर्ने राष्ट्रको रुपमा पनि इजरायल अग्रणि मानिन्छ ।
इजरायलले यसरी कृषिमा चमत्कारीक विकास गर्नुमा पछाडि उसले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लगानी प्रमुख हो । इजरायलका कृषि वैज्ञानिकहरुको अनुसन्धानले आज उसलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ । यसका अलावा कयष् सोइल कण्डीस्नर वा ड्रिप इरिगेसन पनि इजरायलको कृषि विकासको कारण हो ।
इजरायल सरकारले हाल कृषिमा अनुदान दिन छाडिसकेको छ । तर यसको बदलामा कृषि नीति बनाउने, अनुसन्धान गर्ने, वालिहरुको स्वास्थ्यस्थितीमा सुधार ल्याउने, गुणस्तरीय वाली उत्पादन गर्ने र हाइब्रिड वाली उत्पादन तथा विकास गर्ने कार्यमा लागीपरेको छ ।
हाम्रा पनि धेरै किसानहरुले इजरायल गएर तालिम लिएर आएका छन् । साना किसान विकास बैंक मार्फत इजरायलमै गएर यस्तो तालिम लिने व्यवस्था गरिएको छ ।